10+ သင့်ဆိုက်ကိုဘို့အများစုဟာအသုံးဝင်သော WordPress ကို Widgets | Widget လေးကဘာလဲ | ဤပြဿနာကိုဖြေရှင်းပေးရနိုင်ကိုဘယ်လို | WikiWon
10+ သင့်ဆိုက်ကိုဘို့အများစုဟာအသုံးဝင်သော WordPress ကို Widgets | Widget လေးကဘာလဲ | ဤပြဿနာကိုဖြေရှင်းပေးရနိုင်ကိုဘယ်လို
mujeer ဖေဖေါ်ဝါရီလ 17, 20170မှတ်ချက်များ
သင်သည်သင်၏ website ကိုလိုလျှင်အားလုံး setting ကိုထိန်းချုပ်ထဲကမဟုတ်ပါဘူးအမြင့်အကောင်းဆုံး layout ကို setting ကိုအဘို့အားဖြင့်သင်တို့လွယ်ကူသောသင့်ရဲ့ website အတွက်အပြည့်အဝ Customer များအတွက်အလွယ်တကူ WordPress ကို website ကိုမှခွင့်ပြု WordPress ကို, သင်အလွယ်တကူအပြည့်အဝဝစ်ဂျက်အားဖြင့်သင်တို့၏ website က layout ကို setting, များစွာသောအကြောင်းအရာများဖူး,plugins ကိုအခြားသောသူတို့သည်သင်တို့ထိုကဲ့သို့သောမကြာမီဝစ်ဂျက်လူကြိုက်အများဆုံးပို့စ်အဖြစ်ဝစ်ဂျက်ပိုမိုကွဲပြားခြားနားသောကြင်နာထည့်သွင်းဖို့ခွင့်ပြု, ပြက္ခဒိန်, အီးမေးလ်ကို subscribe,
(ကြိုး) (လိုအပ်) အဆိုပါဝစ်ဂျက်ရဲ့ PHP ကိုအတန်းအစားနာမကို. WordPress ကိုအတူထည့်သွင်းအ Widgets တွေအဘို့အအတန်းများမှာ:
WP_Widget_Archives — Archives
WP_Widget_Calendar — Calendar
WP_Widget_Categories — Categories
WP_Widget_Links — Links
WP_Widget_Meta — Meta
WP_Widget_Pages — Pages
WP_Widget_Recent_Comments — Recent Comments
WP_Widget_Recent_Posts — Recent Posts
WP_Widget_RSS — RSS
WP_Widget_Search — Search (ကနေရှာဖွေရေး)
WP_Widget_Tag_Cloud — Tag Cloud
WP_Widget_Text — Text
သင့်ရဲ့ website မှာအဝစ်ဂျက် option ကိုဒီ code ကိုထည့်သွင်းပြသနှင့်သင့် website ကဖိုင်ကို save မဝစ်ဂျက် button ကို၎င်း၏အလွန်လွယ်ကူစွာနှင့်အလွန်အများဆုံးလိုအပ် လာ. , လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုပြုပြင်နဲ့ automatic ဖြစ်ပါသည်.
ဒီ code ကိုထည့်သွင်း (Appearance+Editor+Theme function put the first line your code this code “<div id=”widget-area” class=”widget-area” role=”complementary”>
<aside id=”text-1″ class=”widget widget_text”><h2 class=”widget-title”>ပထမဦးစွာစာသား widget ဘို့ widget ခေါင်းစဉ်</h2>
<aside id=”text-2″ class=”widget widget_text”><h2 class=”widget-title”>ဒုတိယအစာသား widget ဘို့ widget ခေါင်းစဉ်</h2>
<div class=”textwidget”><p>ဒုတိယဝစ်ဂျက်ကိုစာသားဧရိယာများအတွက် text ။</p></div>
</div><!– .widget-area –>”
ပုံပန်းသဏ္ဍာန်ကိုသွားပါ > အ WordPress ကိုအုပ်ချုပ်ရေးပိတ်ကားအတွက်စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်.
အ Widget လေး Customize မျက်နှာပြင်မှဝင်ရောက်ဖို့အတွက်အဓိကအကြောင်းအရာအကောက်ခွန်အတွက် Widget လေး menu ကိုနှိပ်ပါ.
ထိုပြီးသားမှတ်ပုံတင်ပြီး Widgets စာရင်းပြုစုရန် Widget လေးဧရိယာ၏ဆင်းမြှားကိုကလစ်နှိပ်ပါ.
sidebar မှာအောက်ခြေမှာ Widget လေး button ကို Add ကိုကလစ်နှိပ်ပါ. ဒါဟာရရှိနိုင်ပါ Widgets တွေစာရင်းကိုပြသထားတယ်.
သင်ထည့်ချင်သောဝစ်ဂျက်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ. အဆိုပါ Widgets တွေ Sidebar မှာထည့်သွင်းထားရမည်.
သင့်ရဲ့ site ကို preview နှင့်သင်သည်သင်၏အသစ် Widget လေးကနေအကြောင်းအရာမြင်ရပါလိမ့်မယ်.
အ Sidebar အတွင်း Widgets စီစဉ်ဖို့, သငျသညျခငျြသို့မဟုတ်ပြန်စီရန် link ကို click နှိပ်ပြီးမြှားတက် click နှိပ်ပြီးချတစ်ခုချင်းစီ၏ခွင့်ပြုမိန့်အတွက် Widgets တွေဆွဲ and drop
အစီစဉ်စစ်ဆင်ရေးအပြီး Done widget နှင့်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ.
အစိတ်ကြိုက် widget အင်္ဂါရပ်များ, အ Widget လေးရဲ့ interface ကိုချဲ့ထွင်ရန်အညာဖက်မှာကဆင်းမြှားကို click.
အဝစ်ဂျက်ကိုဖယ်ရှားဖို့, Widget လေးရဲ့ကနေ Remove ကိုကလစ်နှိပ်ပါ interface ကို အထက်ခြေလှမ်းအတွက်.
အခုတော့ကိုယ့်ကိုစတင်ရန် 10 WordPress ကိုဆိုက်တွင် widget.
0.1 1.category: ရေးသားချက်များ:
0.2 Related Post ကို: Envato တွင်အွန်လိုင်းငွေရှာဖို့ဘယ်လို
0.3 2.Recent Posts Widget with Thumbnails
0.4 3.Simple Social Icon
0.5 4. လူမှုရေတွက် Plus အား
0.6 သငျသညျဤကဲ့သို့သောလည်းအချို့သောလူကြိုက်များ website ကိုအကောင်းဆုံးအဘို့အရာတစ်ခုခုရှိပါကဒီဂျက်တစ်ခုကိုသင်အလွယ်တကူသင်၏လူမှုမီဒီယာနောက်လိုက်သင့်ရဲ့ Sidebar မှာရေတွက်ပြသခွင့်ပြုဒီရလဒ်ပြသ. ထိုတည်ဆောက်ယုံကြည်စိတ်ချလူကိုကူညီပါ.
0.7 5. Google ကမြေပုံ Widget လေး
0.9 6.စိတ်တိုင်းကျ taxonomy Menu ကို Widget လေး
0.11 8. image ကို Widget လေး
0.12 9.YouTube Channel Gallery
0.13 10. တဲဘ်တပ်ထားဝင်မည် Widget လေး
ထိုကဲ့သို့သောသင့်ရဲ့ post ကိုဝစ်ဂျက်အပေါ်အမျိုးအစားအကြံပြုချက်အဖြစ်မကြာသေးမီကအခြားသူများအမျိုးအစားကိုရွေးချယ် post ကိုပြအဖြစ်. သင်တစ်ဦးစာရင်းတွင် tittle post ကိုပြသချင်သောကြောင့်ကောင်းစွာ thumbnail ကိုအတူပြပွဲကို select လုပ်ပါ.
Related Post ကို: Envato တွင်အွန်လိုင်းငွေရှာဖို့ဘယ်လို
2.Recent Posts Widget with Thumbnails
default WordPress ကိုဝစ်ဂျက်အပေါ်လည်းမကြာသေးမီက posted ပြပွဲနှင့်အတူကြွလာ, display ကိုနှင့်သင်၏ဟောင်းမကြာသေးမီပို့စ်တစ်ခုလွင်ပြင်စာရင်း.
3.Simple Social Icon
၎င်း၏တကယ်အလွန်ရိုးရှင်းတဲ့ဂျက်တစ်ခုကိုသင့်ရဲ့ sidebar မှာအဘို့သင့်လူမှုရေး icon တွေကိုထည့်သွင်း. ပထမဦးစွာသင်လူမှုရေး icon များ၌သင်တို့၏ပရိုဖိုင်းလင့်ခ်ထားရန်ကွန်ယက်ကိုရှေးခယျြ. သင်လည်းပြုပြင်မွမ်းမံနောက်ခံနဲ့ icon ကို font ကိုအရောင်ကိုရွေးချယ်လိုလျှင်.
4. လူမှုရေတွက် Plus အား
သငျသညျဤကဲ့သို့သောလည်းအချို့သောလူကြိုက်များ website ကိုအကောင်းဆုံးအဘို့အရာတစ်ခုခုရှိပါကဒီဂျက်တစ်ခုကိုသင်အလွယ်တကူသင်၏လူမှုမီဒီယာနောက်လိုက်သင့်ရဲ့ Sidebar မှာရေတွက်ပြသခွင့်ပြုဒီရလဒ်ပြသ. ထိုတည်ဆောက်ယုံကြည်စိတ်ချလူကိုကူညီပါ.
5. Google ကမြေပုံ Widget လေး
Its very easily to add the Google Map on your website its have widget put.This widget allows you to easily display your google map follower count in your sidebar. This is one of the best WordPress widgets for businesses who want to display their address and location on their site.
6.စိတ်တိုင်းကျ taxonomy Menu ကို Widget လေး
ဤသည်ပုံမှန်တူ WordPress ကိုအမျိုးအစားဂျက်တစ်ခုကိုလာ, This widget allows you to easily display your Custom Taxonomies Menu follower count in your sidebar.
Its default show monthly archives on widget put show your archives on the blog if you want every month show your all posts how much you write the articles if you have most wanted follow this archives widget, This widget allows you to easily display your archives follower count in your sidebar.
8. image ကို Widget လေး
If you want show your image on your blog like sidebar you need to write the HTML inatext widget. သို့သော်, များစွာသောအရင်ကဆိုရင် HTML ကိုမသိရပါဘူးစနစ်တကျပုံရိပ်တစ်ခုနဲ့ Style မနိုင်. The Image Widget solves this problem by allowed This widget allows you to easily display your Image widget follower count in your sidebar.
9.YouTube Channel Gallery
This widget allow display latest video from your youtube channel show your wordpress website This widget allows you to easily display your youtube channel Gallery follower count in your sidebar.
10. တဲဘ်တပ်ထားဝင်မည် Widget လေး
သင်တို့ကဲ့သို့နောက်ထပ်လူဖန်တီးချင်တယ်ဆိုရင်,follow member on your website its work Widget Tabbed Login Widget. နာမတျောအအကြံပြုထားသကဲ့သို့, ထိုသို့ရဲ့ login ဘို့ tabs များနှင့်အတူတစ်တဲဘ်တပ်ထားဝစ်ဂျက်ထည့်သွင်း, registration and password recovery forms This widget allows you to easily display your social media follower count in your sidebar.
WordPress ကိုပိုမို	best free wordpress widgets, best wordpress widgets, best wordpress widgets 2016, cool wordpress widgets, free wordpress widgets, how to add custom widget in wordpress, popular wordpress widgets, widget definition, wordpress create widget, wordpress footer widgets, wordpress widget plugin, wordpress widget tutorial, wordpress widgets download, wordpress widgets free, wordpress.com widgets	bookmark
ယခင်အပိုဒ် How to make money online in envato | What is Envato Market | How to Signup in Envato | How to start Earning
next ကိုပုဒ်မ 10+ အများစုမှာ Definiatio မိသားစု | မမှန်သောအသံကွိုး | Famciclovir